Ndriandahy Mahamoudou : « mila mifanatona ireo izay tsy mila vahiny mpanelanelana » | NewsMada
Ndriandahy Mahamoudou : « mila mifanatona ireo izay tsy mila vahiny mpanelanelana »
Par Taratra sur 17/05/2018
Tonga avokoa ireo mpanelanelana iraisam-pirenena, hanampy ny Malagasy amin’ny fandaminana ny savorovoro politika. Maneho ny fijeriny ny filoha nasionalin’ny firaisamonina sivily Voifiraisana/PFNOSCM, Ndriandahy Mahamoudou: « Mila mampiseho ny andaniny sy ankilany fa afa-mifanatona miara-mitady ny vahaolana maharitra ho an’ny firenena, raha ohatra ka tena tsy mila mpanelanelana iraisam-pirenena. » Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ny fijerinao ny fitsipahan’ny mpanao politika na olom-pirenena tsotra ny fanelanelanana ataon’ny vahiny amin’ny savorovoro politika amin’izao fotoana izao?
Ndriandahy Mahamoudou (-): Raha ny tena izy tokoa: isika Malagasy ihany dia tokony hahavita handamina ny disadisa misy ato amintsika, raha ohatra ka feno ny fahamatorana sy ny fahavononana eo amin’ny mpifandrafy politika roa tonta.
Raha tsy afa-mifanatona izy ireo, satria sarotra ny fifampihainoana noho ny antony samihafa: tokony hisy vondron-kery malagasy afa-kampifanatona sy hampihavana ary hitarika ny ankolafy roa tonta hitady vahaolana maharitra.
Raha tamin’ny krizy 2009, ohatra: tsy afa-nieritreritra izany rehetra izany isika, satria nanao hazalambo ny teo amin’ny fitondrana sy ireo mpiray dia taminy ny mpanongam-panjakana tamin’izay fotoana izay. Ny mpitarika fiangonana koa, niandany ny sasany tamin’izy ireo ka tsy afa-nijoro ho raiamandreny to teny afa-nampihavana.
Ny mpitandro ny filaminana indray, nizarazara be ihany tamin’ireny fotoana ireny, ka tsy afa-nijoro ho tandroka aron’ny vozona niaro ny Repoblika, tahaka ny nataon’izy ireo tamin’ny Fifanarahana Panorama 1991. Ny firaisamonina sivily, tsy nanana ny tanjaka sy hery ampy nitarihina sy nanerena ny ankolafy rehetra tamin’ny fifanarahana Malagasy samy Malagasy.
* Tsy feno ve izany ny fepetra hahazoan’ny samy Malagasy mandamina irery ny olana amin’izao, ka tsy hotsabahin’ny vahiny?
– Amin’izao fotoana izao, ny fanontaniana ho an’ireo mankahala ny fanelanelanana iraisam-pirenena: afa-mifanatona sy mifampihaino ary mamaritra vahaolana maharitra mifanaraka amin’ny tombontsoam-pirenena ve ny mpifandrafy roa tonta sa samy miziriziry te hampanjaka irery ny heviny avy izay mifanipaka tanteraka?
Raha tsia no valin’izay, moa ve ireo vondron-kery malagasy izay mijoro ankehitriny ho mpanelanelana hampihavana, na izay hafa mety hipoitra ihany koa, manana fahafahana manery azy ireo hiroso amin’ny vahaolana iraisana hivoahana amin’izao disadisa politika izao?
Raha mbola tsia ihany koa ny valin’izay, tsy afa-miala amin’ny mpanelanelana iraisam-pirenena isika Malagasy. Satria ny dikan’izany, izy ireo ihany no afa-manana ireo hery sy tanjaka hampifanatona sy hampiresaka ary hanery ny roa tonta hitandro ny tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenena amin’ny alalan’ny fifanarahana izay tsy maintsy havoakan’izy roa tonta mifandrafy, ka hampihariny ho famahana ny disadisa.
* Tsy azo lazaina ho mitsabaka amin’ny raharahantsika Malagasy ve izy ireo amin’izany?
– Tsia. Satria amin’ny maha mpanelanelana azy ireo na hoe mediatora, tsy izy ireo no manery ny ankolafy roa tonta hanaiky ny vahaolana avy any aminy. Tahaka ny nataon’izy ireo tamin’ny krizy 2009, mitaona na manery raha ilaina ny ankolafy roa tonta mba hifanatona sy hifanaraka amin’ny fomba hivoahana amin’ny disadisa izay mampifandrafy azy roa tonta ny asan’ny mpanelanelana.
Ny ankolafy roa tonta no tarihiny hamoaka miaraka izay heverin’izy ireo fa tondrozotra azon’ny andaniny sy ny ankilany ekena hamoahana ny firenena sy ny vahoaka 25 tapitrisa ao anaty kizo. Tsy maintsy mijoro koa ny vondrona iraisam-pirenena, rehefa misy manana olana goavana ny mpikambana ao aminy: Firenena mikambana, Vondrona Afrikanina, Vondrona eropeanina, Vondrona ACP, SADC, OIF… Mba hisorohana ny fiitaran’ny fiantraikany ratsy any aminy na eo amin’ny lafiny kolontsaina politika, ny fanajana ny tany tan-dalàna amin’ny ankapobeny izany, na koa eo amin’ny lafiny ara-toekarena sy sosialy.
Dikan’izany rehetra izany, tsotra ny azo amintinana: mila mampiseho ny andaniny sy ankilany izay Rangory fototry ny afo amin’izao savorovoro eto amintsika izao fa afa-mifanatona mitady miaraka ny vahaolana maharitra ho an’ny firenena, raha ohatra ka tena tsy mila mpanelanelana iraisam-pirenena hanampy amin’ny famahana ny disadida misy ankehitriny.
Tsorina fa henatra ho antsika Malagasy ihany koa izany hoe alamin’olona avy any lavitra any izany, fa tsy mahaleo tena handamina irery toy ny olon-dehibe manana fahamatorana feno ny olana misy eo amintsika.